Etu esi etolite turmeric na akwa ma obu akpa - Ọgwụ
Etu esi etolite turmeric na akwa ma obu akpa
Ndenye ‌Care‌ ‌Guide‌
All‌ ‌About‌ ‌Turmeric‌ ‌
Mgbe ‌to‌ ‌Plant‌ ‌
Ebee ka ‌to‌ ‌Plant‌ ‌
How‌ ‌to‌ ‌Plant‌ ‌
Sun‌ ‌and‌ em Okpomoku
Mmiri‌ ‌ma‌ um Igwe mmiri
Owuwe ihe ubi‌ ‌‌‌‌‌tor‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
Nchọpụta nsogbu ‌
Ugboro ugboro ‌Asked‌ ‌ Ajụjụ‌
Eto turmeric dị ka ihe eji egwuri egwu site n'iji nwayọ na-esi nri na kichin. Ọ bụ ụdị “setịpụrụ ya ma chefuo ya” ụdị ahụmịhe. Ọtụtụ n'ime otu esi eto turmeric ga-adị mfe site na ọnọdụ na-eto eto kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ihe ndị mejupụtara. Turmeric chọrọ ala na-eme nri, nke ọma nke ọma na ọnọdụ nwere ọtụtụ anwụ na mmiri zuru oke. Ọ chọrọ nyocha oge ụfọdụ iji hụ na ala dị mmiri mmiri, ọ bụghị sọks, na fatịlaịza oge dị ka ị ga-etinye na ngwa nri na ngwa nri gị. Mgbe i ji ndidi chere, ọnwa mgbe ị kụrụ na ị ga-aghọrọ ụgwọ ọrụ gị. Ekwela ka ogologo oge na-eto eto nke ọnwa 10 na-atụ gị ụjọ, dị ka a ga - asị na ihu igwe gị dị mma ọ na - achọ obere nlekọta.
A pụrụ iji turmeric mee ihe ọhụrụ, nke a mịrị amị, ma ọ bụ ntụ dị ka ose na-agbakwunye ọtụtụ efere ma bụrụ onye a ma ama na nri India. Agba ya na-acha odo odo / oroma na-enye ihe yiri ya na nri a na-esiri ya site n'inye aha ọzọ nke saffron India. A na-achọsi ya ike maka ọgwụ ya.
ụdị dị iche iche nke chi nwaanyị braids
Ebe ọ bụ na turmeric toro site na rhizome ma ọ bụ mgbọrọgwụ tubrous, ọ dị mfe ịchekwa ma nweta ụgwọ ọrụ oge site n'oge. Chekwa ole na ole maka osisi na-esote gị! Nwere ike ịmalite site na rhizomes site na ụlọ ahịa ma ọ bụ tinye ego na ụfọdụ site na mkpụrụ mkpụrụ na onyinye ndị na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ ọbụna ịchọta osisi na-amalite site na nurseries ọkachamara na osisi ebe okpomọkụ.
Ezi Ngwaahịa Maka Na-eto eto Turmeric:
Nchekwa Brand ahụhụ Na-egbu Ncha
Neem Bliss 100% Mmiri Enwe Mmetụta Neem Mmanụ
PyGanic Botanical Ahụhụ ahụhụ
NaturesGoodGuys Uru Nematodes
Ọ bụrụ n'ịmụta etu esi eto turmeric, ị nwere ike idobe ngwa ahịa na-enweghị atụ.
Common‌ ‌Names (s) ‌ ‌ UrTurmeric, ginger odo, saffron India
Scientific‌ ‌Name‌ ‌ ‌ Curcuma ogologo
Days‌ ‌to‌ ‌ Owuwe Ihe Ubi ‌ ‌275-300
Ìhè ‌ SunN'ụbọchị zuru oke, ndò na-ele mmadụ anya n'ihu mgbe ọ karịrị ogo 90
Mmiri‌ ‌ WaterAmiri mmiri, zere ọnọdụ soggy
Adaeze ‌ EllIhe na-agwụ ike, nke na-emepụta ihe na-edozi ahụ
Fatịlaịza ‌ FeedHeavy feeder; tinye na-eme nke ọma fatịlaịza
Pests ‌ Aphids, ihe ududo
Ọrịa ‌ Igbo mgbọrọgwụ ire ere, mgbọrọgwụ-eriri nematodes
Turmeric (Curcuma ogologo) bụ osisi na-ekpo ọkụ nke nwere ọtụtụ nri eji esi nri yana e ji esiji ákwà. Ọ bụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ rhizome ka a na-achọkarị. Enwere ike iji rhizomes na-acha odo odo ma ọ bụ oroma rhizomes dị ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị ma nwee ọtụtụ ọgwụ ọgwụgwọ dị ka mgbochi mkpali na akwadoro maka ndị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo ma ọ bụ mbufụt ndị ọzọ. Turmeric nwere ekpomeekpo, ụtọ ụwa na ntakịrị ose na ose.
Mgbe ị na-esi nri na turmeric, na-atụ anya ka ngwaọrụ gị niile na efere nwere ntụpọ-acha odo odo na-adị nwa oge. Ọ bụ ihe a na-esiji esiji nke turmeric nke sitere na mpaghara amaala India nke dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mgbasa nke Hindu na Buddha. A na-eji agba odo odo mee uwe ndị mọnk na ndị ụkọchukwu. Turmeric na-amịpụta ọla edo na-ekpo ọkụ na akwa akwa, akwa, na ajị anụ. Turmeric ntụ ntụ nwere ike ịgbakwunye hue ọla edo na curry, osikapa, na mmiri ara ehi na nri agba agba maka akwa Ista ma ọ bụ achịcha.
Ya mere dị ka ginger na a na-akpọ ya mgbe ụfọdụ ginger, turmeric dị n'otu ezinụlọ ezinụlọ, Zingiberaceae, ma nwee ọnọdụ na-eto eto yiri nke nwanne nwanne ya. Na mgbakwunye na mgbọrọgwụ nri, ọ bụ osisi mara mma ị ga-enwe n'ubi gị. Akwụkwọ ndị na-egbuke egbuke na-agbakwunye ebe okpomọkụ na okooko osisi mara mma. Ọ bụrụ na ọnọdụ gị dị jụụ karịa ọnọdụ ala ya na India na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ọ nwere ike ghara ifuru gị. Ma ọ bụrụ na ọ na-eme, ị nọ na ihe ngosi. Okooko ndị ahụ na-acha ọcha na ụfọdụ nwere odo odo ma ọ bụ pink ndụmọdụ na-eri! Osisi ifuru ahụ na ifuru akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo nwere isi siri ike mana uto turmeric dị nro.
Ahịrị nke osisi turmeric na-eto eto.
Turmeric nwere ogologo oge nke ọnwa 9-10. N'ụzọ dị mma, ọ dịghị achọ nlekọta dị ukwuu n'oge ahụ ọ bụrụhaala na ị setịpụrụ ya maka ihe ịga nke ọma.
Guo azu ka onwa iri bido na oge mbido ntu oyi gi. Maka ọtụtụ ihu igwe, nke ahụ ga-achọ ịkụ ihe n'ime ụlọ na Jenụwarị ma ọ bụ February. Ọ bụrụ na ị na-ebi n'oge na ihu igwe dị nro, ị nwere ike ịmalite na mpụga Machị. Ọnọdụ ala dị jụụ ga-ebute mmalite nwayọ. Chọrọ ka oge ahụ nwee ọtụtụ uto ya na oge okpomọkụ ma banye dormancy na mbubreyo Fall. Mgbe ọ na-abanye ụra ka ọ dị maka owuwe ihe ubi.
Ọ bụrụ na ibi na ihu igwe nwere ọnọdụ na-ekpo ọkụ ruo ogologo oge ị nwere ike ịkụnye turmeric gị n'ime akwa ma ọ bụ n'ime ala. Ọ bụrụ na ndị ala dị jụụ nke rhizomes ga-nnọọ ngwa ngwa pulite. Osisi ohuru ohuru nwere ike itolita rue 3 ‘toro ogologo ka ijide n’aka na inwere otutu oghere ma ghara ikpuchi osisi ndi agbata obi n’enweghi isi.
Ọ bụrụ na ị bi na ihu igwe dịkarịsịrị nwayọ, nabata mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-eto eto. Ghaa turmeric n’ime ite nke enwere ike imeghari n’ime ụlọ mgbe ọ dị mkpa. N'agbanyeghị mpaghara ahụ, ịkọ ihe n'ite na-enye ohere ka a na-akwagharị osisi turmeric iji nye ya ọtụtụ okpomọkụ na anwụ ma ọ na-enye ohere maka ndò ma ọ bụ nye anyanwụ edozi ma ọ bụrụ na okpomọkụ dị oke.
Họrọ plhi rhizomes nwere ọtụtụ bumps ma ọ bụ ọnọdụ nwa osisi n'akụkụ n'akụkụ. Rhizome na-ebuwanye ibu ị ga-ahụ Ome. Ekwela ka ịkpụ n'ime obere ngalaba dịka ị nwere ike iji poteto. Osisi turmeric na 3-4 bumps ọ bụla. Ọ bụrụ na ị belata rhizomes gị n'ime obere iberibe, gwọọ ha ma ọ dịkarịa ala otu izu maka ịkpụ ahụ na ọkpọkọ, si otú a belata ohere ire ere.
Dina mgbọrọgwụ turmeric gị na ala ma kpuchie ya na 1 inch nke ala. Na-mmiri, ma ọ bụghị soggy. Ọ bụrụ n’ibido turmeric n’ime ụlọ, jiri obere ite 3-5 ”ma ọ bụ okpokoro rọba nwere ahịhịa. Ebe ke warmest ebe ị na adị na uto nke Ome. I nwekwara ike iji seedling kpo oku ute. Ọ dịghị mkpa iji ọkụ na-eto eto ruo mgbe ị hụrụ ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-apụta.
Ozugbo i nwere agbapu nke dị atọ atọ n’ịdị elu, ha kwesịrị ibufe ya na ite buru ibu. Ọ bụrụ na ị na-edebe turmeric gị n’ime ụlọ, ị ga-achọ ihe nwere ike ịnọ n’okpuru ọkụ na / ma ọ bụ windo anwụ na-acha. Nọgide na-enye ihe ikpo oku iji debe ogo 70. Ọ bụrụ na ị na-akụ n'èzí na-amalite rhizomes nwere ike idowe n'èzí 4-6 sentimita asatọ iche na 2-4 sentimita asatọ miri.
Atụla ụjọ ma ọ bụrụ na ọ na-ewe ogologo oge ruo mgbe ị hụrụ Ome. Turmeric chọrọ ọnọdụ ọkụ iji teta ma nwee ike nwayọ nwayọ ịmalite. Mee ha ka o sie ike ma nwee ndidi.
Rhizomes Turmeric bụ akụkụ kachasị eji osisi.
Gbalịa ịmeghachi ọnọdụ ndị na-eto eto nke ebe okpomọkụ nke ahịhịa turmeric: kpoo ọkụ na oke mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na ọnọdụ ndị ahụ zutere ị ga-ahụ ihe ịga nke ọma!
Turmeric na-enwekarị obi ụtọ mgbe enyere ọnọdụ na ogige zuru oke na anwụ, ọnọdụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ, na gburugburu ebe obibi. Uzo di nma nke Turmeric di n’agbata 68 na 86 ° F (20 na 30 ° C).
nri na braids igbe braids
N'oge oke okpomọkụ karịa 90 Celsius, ọ ga-achọ ndò ehihie na mmiri ọzọ. Na Mpaghara 8 na n'elu, a ga-enweta ọnọdụ ndị a n'èzí n'afọ niile. N'ebe a na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ, ahịhịa turmeric na-etinye n'ime akpa na patio nke ehihie n'ehihie na ụmụ nwanyị nwere ike i mimomi ọnọdụ ndị a.
Eto turmeric na mpaghara oyi ga-achọ ịkwaga n'ime ụlọ iji nye ọnọdụ ndị a na mmalite oge opupu ihe ubi na ọdịda. Turmeric agaghị anagide oke oyi na rhizomes agaghị arụ ọrụ karịa 60 Celsius (15 Celsius C).
Mgbe ị na-amalite rhizomes turmeric, nye mmiri zuru oke mana ekwela ka ha nwee oke mmiri ma ọ bụ na ha ga-amalite ire ere. Ala kwesiri inwe mmiri mmiri, ma obughi soggy. Ọnọdụ nwere ezigbo drainage dị mkpa. Iji nwayọ nwayọ sooks ma ọ bụ soaker sooks nwere ike inyere aka na mmiri mgbe niile, karịchaa ma ọ bụrụ na ọ dị na a sooks ngụ oge .
Ozugbo osisi turmeric pulitere, debe otu mmiri ahụ, ma ọ bụghị ọnọdụ soggy. O nwere ike bụrụ ihe na-ekpo ọkụ ma mechaa n'oge ahụ, yabụ a ga-achọkwu mmiri iji kwado ọnọdụ ndị a. Mgbe owuwe ihe ubi na-eru nso, wedata ịgbara otu izu ma ọ bụ abụọ. Iwepu rhizomes site na ala kpọrọ nkụ yikarịrị ka ọ ga-eme ka ha ghara ịdị.
Turmeric nwere mmasị mmiri, mana inye ala, na-agbapụta mmiri bụ isi. Clay ala Ọ ga-adị mkpa ịrụ ọrụ ma tọpụ ka osisi wee gbasaa ala. Tinye otutu compost nke agadi iji mee ka ala dịkwuo ala. Perlite nwere ike melite drainage nke apịtị, ala mmiri. Ọ bụrụ na ejuputa ite, ihe eji eme ihe eji eme ihe ga-arụ ọrụ nke ọma.
Akụkụ niile nke osisi turmeric tinyere epupụta bụ ihe oriri.
Turmeric bụkwa onye na-enye nri dị arọ yabụ jiri ngwakọta ala juputara na ngwongwo nke nwere ezigbo compost ịmalite. Ozugbo turmeric na-arụsi ọrụ ike, na-eri nri n'oge a kwa izu ole na ole. Worm oge ọgbụgba , fatịlaịza mmiri mmiri, ahịhịa granular organic, ma ọ bụ tii tii bụ ezigbo nhọrọ. Ọ bụrụ n’ịchọpụta ite gị na-eto eto na-efunahụ olu, jiri ezi compost na-ekpochapụ.
Nwere ike ihupụta na mpụga turmeric epupụta amalite ịtụgharị aja aja. Ọ bụrụ na nke a bụ n'isi oge ọ nwere ike igosi na igwe turmeric gị na-anata oke anwụ ma nwee ike iji ndo ụfọdụ. Kpuchaa agba aja aja iji nye ume maka ohuru ohuru.
Ọ bụrụ na nke a na-eme na njedebe nke oge uto na ihe dịka ọnwa 10 nke uto, ọ fọrọ nke nta ka ị ghara iwe ihe ubi! Hapu akwukwo dika-ma wedata mmiri na nkwadebe maka owuwe ihe ubi.
Dị ka ọ na-adịkarị, naanị usoro nwere ike ịba ụba nke turmeric sitere na rhizomes. N'adịghị ka ọtụtụ osisi ndị ọzọ, ọ naghị amị mkpụrụ bara uru, kama ịmalite n'ụzọ bụ isi site na mgbatị mgbọrọgwụ.
Mgbe owuwe ihe ubi, anaghị eji turmeric gị niile. Chekwaa ụfọdụ maka ịkụ ihe n’afọ na-esote ma ọ bụrụ na ịchọtara turmeric gị ka ọ bụrụ ọtụtụ ga-eme nke ọma ma ọ masịrị gị. Chekwaa ịkụ mkpụrụ na ebe dị jụụ, ebe gbara ọchịchịrị ruo oge akuku.
Akọrọ na ntụ ntụ turmeric ma ọ bụ ifriizi ndị rhizomes maka nchekwa.
Ọhụrụ turmeric mgbọrọgwụ dị njikere ihe ubi mgbe ọ banyere dormancy. Nke a bụ mgbe mgbọrọgwụ turmeric ga-abụ nke kachasị ukwuu na onye tozuru etozu nwere ekpomeekpo kachasị maka mkpa nri gị n'ọdịnihu. Oge bụ ihe kachasị egosi gị. Ọ kwesịrị ịdịkarịa ala ọnwa 9 ruo 10 kemgbe opupu. Mpụga dị iche iche kwesịrị ịmalite ịmalite ịchacha aja aja ma malite ịnwụ.
Ọ bụrụ na ọnọdụ gị na-eto eto yiri nke ala nke mpaghara okpomoku nke turmeric ị nwere ike ịhụ ya ifuru. Okooko ndị siri na ọcha, na ụfọdụ odo odo ma ọ bụ pink Atụmatụ. Ifuru ahụ abụghị ihe ngosi na ọ dị njikere iwe ihe ubi ma na-apụtakarị na ngwụsị oge opupu ihe ubi / mmalite oge ọkọchị.
Iji ite eme ihe maka itolite na-emekwa ka owuwe ihe ubi dị mfe. Kama ịdọrọ na osisi, gbanye ite ahụ n'akụkụ ya ma jiri nwayọ wụpụ ihe ndị dị na ya iji aka gị hapụ rhizomes na ala. Turmeric rhizomes na-etolite n’akụkụ nodules ma yie aka ma ọ bụ mkpịsị aka aka. Ha nwere ike ịkwụsị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị si n'elu. Ofzọ owuwe ihe ubi a anaghị ejikwa ngwá ọrụ dị egwu dịka ị nwere ike ịkụ ma ọ bụ mebie rhizomes. A na-ejikwa ebe a na-egwu ala ebe akwa akwa ma ọ bụ n'ime ala na-echekwa rhizomes.
Post-owuwe ihe ubi nke ọhụrụ rhizomes nwere ike jiri nwayọọ rinsed iwepu unyi. Ọ bụla ogologo stringy mgbọrọgwụ nwere ike wedata iji dị ọcha ịkwa osisi . Njikọ n'etiti etiti na rhizome bụ ebe ikewapụ ha.
Ọ bụrụ na iwe ihe ubi ma ọ bụ okooko osisi, belata naanị ihe ị ga-achọ. Ndị a anaghị echekwa nke ọma, yabụ na ị ga-eji ndị ahụ dị ọhụrụ site na ogige ahụ.
Chekwaa turmeric ohuru n'ime akpa ikuku na ngwa nju oyi. Ọ kachasị mma ịme atụmatụ iji ya mee ihe ọhụrụ n'ime izu ole na ole ma ọ bụ kwadebe maka nchekwa oge dị ka iberibe mmiri, ntụ ntụ, ma ọ bụ oyi. Turmeric ntụ ntụ nwere ike ịbụ nke kachasị dịkarịsịrị na nke a na-ahụkarị.
Iji kwadebe turmeric ntụ ntụ, bee mgbọrọgwụ turmeric n'ime obere iberibe ma akpịrị ịkpọ nkụ . Iberibe ahụ kwesịrị ịbụ akọrọ iji snap mgbe agbajiri. Gri ihe na igwe nri, ihe na-edozi isi ma obu ihe na-esi isi.
Akwụkwọ sara mbara bụ nke ahịhịa ndụ na nke anya mmiri, na-agbakwunye na njedebe dị na stalk.
Imirikiti nsogbu ndị na-ebili na osisi turmeric na-eto eto nwere ike ịbụ n'ihi ọnọdụ dị na mpụga nke ezigbo ọnọdụ okpomọkụ na oke mmiri. Oke mmiri, oke akọrọ, anwụ n ’oke ihu igwe, ma ọ bụ ọnọdụ oyi nwere ike ibute uto na nsogbu ahụhụ.
Na-ahọpụta ndị ọnọdụ kwesịrị ekwesị na-eto eto n'ihi na osisi gị ga-ezere ọtụtụ nsogbu. A na-atụ aro ndị nwere ezigbo drainage.
Watergbara mmiri gabiga ókè ma ọ bụ ogbenye drainage ga-akpata fungal ọrịa na rotting. Gbaa mbọ hụ na mmiri na-ehichapụ ngwa ngwa na ala. Lelee ala anya dị ka sentimita asatọ. O kwesiri ibu mmiri, ma obughi soggy. Gbanwee usoro mmiri gị iji chekwaa ọkwa kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị na-eji oge eme ihe ka ị timụọ mmiri na-echebara echiche na ị na-enye mmiri ugboro ugboro ka ọ dịrị mmiri, ma ọ bụghị ogologo oge iji mee ka ọnọdụ ndị na-adọrọ adọrọ.
Site na akpa ị nwere ike ịmalite site na ezigbo ala ọkpụite nke dị ọhụrụ na agaghị ewebata gbaa borers , mgbọrọgwụ-eriri nematodes , na-achọgharị nematodes , na ọnya nematodes nke ahụ ga-emebi rhizomes. Ọ bụrụ na ị na-etolite n’ime ala ma ọ bụ na-etolite akwa ọ dị mkpa ịtụgharị ihe ubi a kụrụ n’oge ọ bụla iji zere pests ndị a.
Ọ bụrụ na osisi gị na-ada mbà, ị nwekwara ike ịchọta ha dị mfe maka pests dị ka aphids ma ọ bụ ihe ududo . Gbaa mbọ hụ na usoro ịgba mmiri kwesịrị ekwesị yana epupụta adịghị akpọ nkụ. Nri na-edozi ahụ kwesiri ịbụ oke ma nye fatịlaịza oge niile. Gbado anya na ike gị iji dozie ihe na - eme ka osisi turmeric gị ghara isi ike. Wepu aphids ma ọ bụ ududo ejiri ncha ahụhụ, mmanụ neem ma ọ bụ ihe siri ike nke sooks. Maka oke ntiwapụ, ọgwụ piree nke nwere mmetụta dị mma n'ibelata ọnụ ọgụgụ mmadụ.
esi nye uche na -afụ ọnụ
Turmeric dị nro dị nro mgbọrọgwụ ire ere kpatara pythium. Ọ dị mkpa iji jide n'aka na ọ bụ ezie na ala ahụ na-anọgide na mmiri, ọ bụghị mmiri mmiri. Mgbakwunye nke microbial biofungicide nwere ike ịba uru.
Osisi turmeric nwere ike buru oke ohia dika o na amalite ahihia.
Ajụjụ: Enwere ike ‌you‌ ‌grow‌ ‌turmeric‌ site na ụlọ ahịa zụtara? ‌
A: ‌‌N'ezie! Iji tolite mgbọrọgwụ gị nke turmeric na-achọ organic nke a na-ekwesịghị ịgwọ ma na-emetụta ikike o nwere. Ọ na-ahụkarị ịchọta turmeric ọhụrụ na nri ndị ọkachamara na nri Asia ma ọ bụ nke Indian.
Ajụjụ: ‌‌‌‌ururur urturmeric‌ ‌an‌ ‌annual‌ ‌or‌ ‌perennial?
A: ‌ ‌Turmeric na-ahụta ka a perennial. Enwere ike iwe ya na okirikiri kwa afọ mgbe ọ nwụrụ ma bido ịmịpụ ụra.
Ajụjụ: ‌Are‌ ‌turmeric‌ ‌leaves‌ ‌edible? ‌
A: ‌ ‌ Ee! N'ezie, akụkụ niile nke osisi turmeric bụ nri. Akwụkwọ ya nwere ekpomeekpo dị nro ma nwee ụfọdụ ụdị ahụ ike.
mmekọrịta Rihanna na asap rocky
mgbe ịmalite iji retinol